Nin Walaalkiis ku dilay magaalada Dhuusamareeb oo la qabtay | HalQaran.com
Nin Walaalkiis ku dilay magaalada Dhuusamareeb oo la qabtay
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Ciidamada Booliska Magaalada Dhuusamareeb ee Xarunta Maamulka Galmudug ayaa gacanta ku soo dhigay nin walaalkiis xalay ku dilay Magaalada Dhuusamareeb.
Faa’id Salaad Caraale ayaa Ciidamada Booliska ee Magaalada Dhuusamareeb Gacanta ku dhigeen kaas oo hadda ku xiran Saldhiga Booliska magaalada ka dib markii uu Xalay Dilay Walaalkiis Raage Saalax Caraale.
Dilka ayaa waxaa uu ka dhacay Xaafadda Waabari waxaana hada socanaya Baaritaan kaas oo la xariira waxyaabaha keenay in Faa’id inuu Dilo Walaalkiis.
Taliyaha Booliska Dhuusamareb ahna Taliyaha Xasilinta Caasimada Gaashaanle Cabdullahi Xassan Macallin ayaa warbaahinta u sheegay inuu Xiran yahay Ninka Dilka gaystay Baaritaan ka dibna ay ka bixin doonaan Faahfaahin.
Dadka Magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay dilka inuu salka ku haayo muran ka dhex taagnaa labadan wiil muddooyinkii dambe, kaasi oo sababay ugu dambeyn in Faai’id dilo walaalkiis.
Magaalada Dhuusamareeb ayaa si wayn looga hadal hayaa dilka ninkaan uu u gaystay walaalkiis.
Nin Walaalkiis ku dilay Dhuusamareeb oo la qabtay